Lupyo News - Page 230 of 241 - News and Media
ရောဂါဆယ်မျိူးကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတဲ့ ဆိပ်ဖလူးပင်၊ အပွင့်၊ အခေါက်
April 19, 2020 by Lupyo News
ရောဂါဆယ်မျိူးကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတဲ့ ဆိပ်ဖလူးပင်၊ အပွင့်၊ အခေါက် တန်ဖိုးကြီးသောဆေးပွင့် မူးဝေငိုက်မျဉ်းခြင်းကို ပယ်ပျောက်စေနိုင်ပြီး စိတ်ကိုကြည်နူးစေသော ဆေးပွင့်။ သွေးဆေးဖော်စပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ဆေးပွင့်ဖြစ်သည်။ ဆိပ်ဖလူးပင်၏ ပ ဉ္စငါးပါးသည် ဆံပင်ကို အကျိုးပြုသည်။ ဆံပင်ကျွတ်သောရောဂါကို ကောင်း၏။ မီးယပ် သွေးလွန်၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါ၊ အဆစ်ရောင်၊ သုတ်အားနည်းခြင်း၊ ဆီးလွန်ရောဂါ၊ ကလေးသန်ထိုးသောရောဂါ၊ တိရိစ္ဆာန်များ အဆိပ်သင့်သောရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေသည်။ ကိုယ်ဝန်ကို ကြီးထွားစေသည်။ (၁) ဆိပ်ဖလူးပွင့်ကို စုဆောင်း အမှုန့်ကြိတ်၍ သကြားနှင့် ရောစပ်၍ နေ့လယ် လဖက်စားဇွန်း တစ်ဇွန်းမှန်မှန်သောက်ပါက အမျိုးသားများ သုတ်သွေး အားကောင်းစေသည်။ (၂) ဆိပ်ဖလူးပွင့်ကို သကြားနှင့်ကြော်စားလျှင် မိန်းမတို့ ဘုန်းဆံထုံးဆိုသည့်အတိုင်း အမျိုးသမီးများ ဆံပင်ကောင်းစေ သန်စေသည်။ (၃) ဆိပ်ဖလူးပွင့်ကို … Read more
ဝူဟန် ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ဗိုင်းရပ်စ်(၁၅၀၀)ရှိတဲ့ ရေခဲသေတ္တာ၊ လုံခြုံရေး ကျိုးပေါက်နေတဲ့ ပုံများ ပေါ်ထွက်လာ
ဝူဟန် ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ဗိုင်းရပ်စ်(၁၅၀၀)ရှိတဲ့ ရေခဲသေတ္တာ၊ လုံခြုံရေး ကျိုးပေါက်နေတဲ့ ပုံများ ပေါ်ထွက်လာ အာရှအကြီးဆုံးဗိုင်းရပ်စ်ဘဏ်လို့ ဆိုနေကြတဲ့ Wuhan’s Institute of Virology မှ ဗိုင်းရပ်စ် ဗီဇမျိုးကွဲ (၁၅၀၀)ကို သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ရေခဲသေတ္တာ ရဲ့ Seal ကျိုးပေါက်နေကြောင်း ဓာတ်ပုံသက်သေတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ တကယ်က ဒီဓာတ်ပုံတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈)ခုနှစ် China Daily သတင်းစာမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဖြစ် ပါတယ်။ အဆိုပါ ဓာတ်ပုံတွေကို ယင်းသတင်းစာရဲ့ တွစ်တာပေါ် မှာ တင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူ အများစုက လုံခြုံရေးအထူးစီမံထားရမယ့် ရေခဲသေတ္တာရဲ့ Seal ဟာ ကျိုးပေါက်နေကြောင်း ထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေ ရှိခဲ့တဲ့အတွက်၊ အဆိုပါဓာတ်ပုံတွေကို China Daily က … Read more
ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် ကိုရိုနာကပ်ရောဂါ အကြောင်းကို မိန့်ကြားလိုက်တဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး …
ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် ကိုရိုနာကပ်ရောဂါ အကြောင်းကို မိန့်ကြားလိုက်တဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး …..။ ၁။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီးဟာ လူသားပေါင်း သန်း (၁၀၀) ကျော်ကူးစက်ခံရမယ်။ ၂။ ၂၀၂၀ နဲ့ ၂၀၂၁. ခုနှစ် တွေဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် အဆိုးဆုံးနှစ်တွေဖြစ်တယ်။ စီးပွားပျက်ကပ်တွေလည်းဖြစ်မယ်။ ဘုရားတရားမြဲကြပါ အဆိုးတွေလာမယ်။၂၀၂၂ မှ အကောင်းဘက်ပြန်ရောက်မယ်။ ၃။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိူင်ငံဟာတစ်နိူင်ငံလုံးနီးပါး ကူးစက်မှု့အများဆုံးနဲ့သေဆုံးမှု့အများဆုံးဖြစ် ကာ အလောင်းများတောင်လိုပုံပြီး ကမ္ဘာမှာ အဆိုးဆုံးခံစားရတဲ့နိူင်ငံဖြစ်မယ်။ ၄။ ကပ်ရောဂါအနည်းဆုံးခံစားရမယ့်နိူင်ငံက ဘူတန် နိူင်ငံဖြစ်မယ်။ ၅ ။ကပ်ရောဂါဟာ တရုတ်နိူင်ငံကစဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ တရုတ်နိူင်ငံမှာပဲအကြီးအကျယ်ပြန်ဖြစ်ပွားကာ အဆုံးသတ်သွားမယ်။ ၆ ။မြန်မာပြည်မှာ တော့ ဘုရား တရား မြဲတဲ့ဒေသနဲ့ ကောင်းမှု့များတဲ့ဒေသတွေဟာ ကပ်ရောဂါမှကင်းဝေးမယ်။ကပ်ရောဂါတွေရှောင်ကွင်းပြီးမကျရောက်နိူင်တော့ဘူး။ ၇။ ကပ်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာ အကောင်းဆုံးကာကွယ်ဆေးက ဘုရား … Read more
အသက်၃၀ အရွယ်မှာ စတင်ရမယ့် အရာများ
အသက်၃၀ အရွယ်မှာ စတင်ရမယ့် အရာများ (မဖြစ်မနေ ဖတ်ကြည့် လိုက်ပါနော်) အသက် ၃၀+ ဆိုတာ ဘဝရဲ့ငါးပုံ နှစ်ပုံခန့်ကို ဖြတ်သန်းပြီးစ အရွယ်ဖြစ် ပါတယ် ။ နုပျိုမှုနဲ့ဘဝ အတွေ့အကြုံ ဉာဏ်ပညာ ရင့်ကျက်မှု သမမျှတ တဲ့ အရွယ်ပါ။ ဒီအရွယ်မှာ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် ၁၉ ချက်ကို ၃၀ ပြည့်စ၊ ကျော်စ သူငယ်ချင်းတွေ ဖတ်ဖို့ ပါ။ ၁။ ဆေးလိပ် မသောက် ပါနဲ့။ ဆေးလိပ်သောက်တတ် သူဆို ရင်လည်း ချက်ချင်းဖြတ် ဖို့ကြိုးစား ပါ။ ပိုက်ဆံ ကုန်တယ်၊ အနံ့ဆိုး တယ်၊ ရောဂါရဖို့ ၁၀၀%နှုန်းပြည့် သေချာ တယ်။ ဆေးလိပ်သောက် တာကို ခုပဲ … Read more
* အချစ်ရဲ့ ဒုက္ခ *ကို ကောင်းကောင်းကြီးသိသွားတဲ့ ဆရာမရဲ့ အဖြစ်
* အချစ်ရဲ့ ဒုက္ခ *ကို ကောင်းကောင်းကြီးသိသွားတဲ့ ဆရာမရဲ့ အဖြစ် ထိုင်ဝမ်မှာ အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦးရှိပါတယ်။သူဟာ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်ကောင်းတုန်းမှာပဲ ယောက်ျားဆုံးပါးသွားပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့ သားလေးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ သားလေးကို ဘထွေးနဲ့ မကြုံစေချင်လို့နောင်အိမ်ထောင်ထပ်မပြုပဲ အမေတစ်ခုသားတစ်ခုနဲ့ ပဲ သားလေးကို ပျိုးထောင်လာခဲ့ပါတယ်။သားလေးလည်း အလွန်လိမ္မာပါတယ်။အမေ့ကိုလည်း အလွန်သိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆရာမ၀င်ငွေငွေလေးနဲ့ သားလေးကိုရှိစုမဲ့စု ပျိုးထောင်လာခဲ့ပါတယ်။သားကလည်း ထူးချွန်တာမို့ အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပညာတော်သင် စေလွတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကမှာ သားကလည်း ထူးချွန်ပါတယ်။ ကျောင်းပြီးလို့ အလုပ်ကောင်းပြီး အမေရိကမှာပဲအိမ်ထောင်ပြုပြီး ကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်လုံး ၀ယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြေးကလေးတစ်ယောက် ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူ ဆရာမကတော့ တာဝန်နဲ့မို့ဆရာမအဖြစ်ပဲ ထိုင်ဝမ်မှာ ဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလုိုနဲ့ ဆရာမကြီးဟာ ပင်စင်ယူချိန်နီးလာပါတော့တယ်။ ပင်စင်ယူချိန်နီးလာလေလေ သားနဲ့ မြေးလေးကိုသတိရလေလေဖြစ်ပြီး သားလေးမိသားစုနဲ့သွားရောက်နေထိုင်ဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြလာပါတယ်။ အမေ့ဖြစ်သူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ သားလိမ္မာကြီးကိုသတိရပြီး ပီတိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။သြော် … Read more
အသက်အငယ်ဆုံး Covid-19 လူနာ ၁ နှစ် ၆ လ ကလေးငယ် အဖျားမရှိတော့ ….
အသက်အငယ်ဆုံး Covid-19 လူနာ ၁ နှစ် ၆ လ ကလေးငယ် အဖျားမရှိတော့ …. မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက်အငယ်ဆုံးလူနာအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ထားသည့် လူနာအမှတ် ၉၅ (၁ နှစ် ၆ လ) အရွယ် ကလေးငယ်လေးတွင် ချောင်းအနည်းငယ် ဆိုးနေရုံမှအပ အဖျားမရှိတော့ကြောင်း ဝေဘာဂီဆေးရုံတွင် တာဝန်ကျနေသည့် ကလေးအထူးကုဆရာဝန်မကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါက်တာခင်ခင်ထားက ဧပြီ ၁၉ ရက် ယနေ့မွန်းလွဲ ၁းဝ၅ နာရီခန့်တွင် သူမ၏ Facebook မှ ဝမ်းသာစွာ ရေးတင်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဆိုပါ လူနာအမှတ်စဉ် ၉၅ ကလေးငယ်သည် ကွယ်လွန်သူ လူနာအမှတ်စဉ် ၃၉ ၏ မြစ်တော်စပ်သူဖြစ်ပြီး လူနာအမှတ်စဉ် ၉၅ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဟု ယမန်နေ့(ဧပြီ၁၈) ညက သတင်းအမှားများထွက် … Read more
အနုပညာရှငျတှရေော ပရိသတျတှပေါ အရမျးသဘောကနြကွေတဲ့ ကိုပေါကျရဲ့ ဟာသ(ဗီဒီယို)
အနုပညာရှငျတှရေော ပရိသတျတှပေါ အရမျးသဘောကနြကွေတဲ့ ကိုပေါကျရဲ့ ဟာသ(ဗီဒီယို) သဏ္ဍာန်လုပ်သရုပ်တူဆိုတဲ့အတိုင်း ဒါရိုက်တာကိုပေါက်တစ်ယောက် အိမ်ထဲမှာပဲနေရတဲ့ ကာလတွေမှာ ကိုယ်တိုင်လည်းအပျင်းပြေသလို ပရိသတ်ကြီးလည်း ထပ်တူပျော်ရွှင်နိုင်စေဖို့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတွေ လူမှုကွန်ရက်မှာ ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ မိန်းမလျာဇာတ်ရုပ်ကို အတော်လေး ပီပြင်ပိုင်နိုင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာတော့ ဇာတ်ကားတွေက သက်သေပါပဲ ဟိုရက်ကလည်း မိန်းမလျာပုံစံနဲ့ ခပ်နွဲ့နွဲ့လေးသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့မှာလည်း သတင်းကြေညာ သူအဖြစ် နှုတ်ခမ်း နီပါဆိုးကာ ဟန်ပါပါသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Tik Tok လေးဟာ အနုပညာရှင်တွေ ရော ပရိသတ်တွေပါ အရမ်းကိုသဘောကျပြီး ကြည့်ရှုသူလည်း လေးသောင်းကျော်ခန့်ရှိသွား ခဲ့ပါပြီ။ အနုပညာဗီဇကတော့ အိမ်ထဲမှာနေတာတောင် ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေနေတုန်းပဲ ဒီဗီဒီယိုလေးကို ပရိသတ်တွေရယ်မောရအောင် ” ကျွန်မက မြဝတီTVက သတင်းကြေငြာသူ မမ မေသူပါရှင့် ” … Read more
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက Covid-19 ရောဂါပိုးကို စံချိန်တင် မတော်တဆ ဖြန့်ဖြူးမိကြသူများ…
“COVID-19 ရောဂါပိုးကို စံချိန်တင် မတော်တဆ ဖြန့်ဖြူးမိကြသူများ..” ရံဖန်ရံခါမှာ နေရာတစ်နေရာ လူတစ်ယောက်ဆီကနေ မိမိရဲ့ပေါ့ဆမှု မသိနားမလည်မှု့တွေကြောင့် လူအများကြီးဆီကို ရောဂါပိုးဖြန့် သလို ဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ (ဒီပို့စ်ဟာ ဖော်ပြပါလူတွေကို အပြစ်တင်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ မိမိကိုယ်တိုင် ဆင်ခြင်ဖို့နဲ့ ဝေဖနိသုံးသပ်ဖို့သာဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါတယ်။) “ကိုးရီးယား” Case 31 လို့ လူသိများတဲ့ ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာ လီမန်ဟီးဟာ ကမ္ဘာကျော် Super Spreader တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဝူဟန်မြို့ သွားခဲ့တာကို ဖုံးကွယ်လိမ်ညာခဲ့လို့ လူရာချီကျင်းပခဲ့တဲ့ ရှင်ချုံဂျီ ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲမှာ သူမကနေတစ်ဆင့် တက်ရောက်သူတွေ ဒယ်ဂူးတစ်မြို့လုံးနီးပါး ကူးစက်ကုန်ပါတယ်။ တစ်တိုင်းပြည်လုံး လူပေါင်း ၃၇၃၀ ကျော်ကူးစက်ခဲ့ရာမှာ ထက်ဝက်လောက်ဟာ အဲဒီဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူက … Read more
ဒေးဗစ်လား နဲ့ ကိုမျိုးကြီးတို့ ယေရှု ဘုန်းတန်းခိုးကြောင့် မကြာခင် ပြန်ကောင်းလာမှာလို့ ပြောလိုက်သူ…
မနေ့က သတင်းတွေတက်လာတော့ တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဘူး…။ ကိုယ်တော်ဘာလို့ မကွယ်ကာ ပေးလဲလို့တွေးမိတယ်။ ကိုယ်တော့်ကို မေးခွန်းတွေ ထုတ်ခဲ့မိတယ်…။ ဒါပေမဲ့ ဒီမနက် ဒံယေလ အကြောင်းလေးဖတ်လိုက်ရတော့ စိတ်သက်သာရာရခဲ့တယ်။ (accထဲ ရှာဖတ်နိုင်တယ် shareထားပါတယ်) ပြီးတော့ ဘုရားသခင်စွန့်ပစ်ပြီလား ကိုယ်တော်ရယ်လို့ မေးခွန်းထုတ်မိပေမဲ့….။ ငှက်ကလေးကို သူ့မိခင်က အမြင့်ဆုံးထိ ချီဆောင်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ ရုတ်တရက်ကြီး ပစ်ချလိုက်တယ်…။ ငှက်ကလေးက ယက်ကန်ယက်ကန် နဲ့ပြုတ်ကျသွားတယ်။ သူပြုတ်ကျနေတာကို ကျီးကန်းတွေ လဒတွေကလဲ လှောင်ရယ်နေကြပါသတဲ့…။ ငှက်ကလေး နာကျင်ရပါတယ်။ငှက်ကလေး ဝမ်းနည်းရပါတယ်။ငှက်ကလေး စိတ်ဖိစီးရပါတယ်။ အရှက်လဲ ရစရာပါ..။ မေမေက မချစ်ဘူးလား။ ဘာလို့ပစ်ချလဲ သူ့အတွေးတွေ ယောက်ယက်ခတ်နေပါတယ်…။ ဒါပေမဲ့ သူ့အမေက သူ့ကို ပစ်ချတာ မချစ်လို့မဟုတ်သလို စွန့်ပစ်တာမဟုတ်တာဘူး… Level,တစ်ဆင့်မြင့်စေချင်လို့ ပျံသန်းတက်စေချင်လို့ … Read more
case 87 နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန် mask မတတ်မိလိုက်လို့HQ ၀င်လိုက်ရတဲ့ စေတနာရှင်လူငယ်လေးရဲ့အဖြစ်…
အရေးကြီးတဲ့ အချိန်မှာမှ ကျွန်တော်တော့ နားရပြီလေ ။ တာမွေမြို့နယ် (နတ်မောက်ရပ်ကွက်) မှာတွေ့တဲ့ case 87 ရဲ့အိမ်ကို 4.4.2020 က ရပ်ကွက်မှာ ဆေးဖြန်းရင်း case 87ရဲ့တူမက အကူအညီတောင်းလို့ ဝင်ပြီးဆေးဖြန်းပေးပါဆိုလို့ ဝင်ရောက်ဆေးဖြန်းပေးခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီ အိမ်က လူတွေနဲ့ ရင်းနှီးတော့ ကျွန်တော့်လူငယ် တစ်ယောက်က အဲ့ဒီ့ အိမ်ကိုဆေးဖြန်းရင်း ကျွန်တော်က case 87 အပါအဝင် သူ့မိသားစု ဝင်တွေ နဲ့ ၅မိနစ် မှ ၁၀မိနစ်လောက် စကားပြောခဲ့ကြပါတယ်…။ ကိုယ်လဲ အဲ့ဒီတုန်းက စကားပြောနေတဲ့ အချိန်မှာ mask မတက်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး 😫ဲ့case 87 နဲ့ စကားပြောတာ အနည်းဆုံးတော့ သုံးပေ လေးပေလောက်ကွာမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့အန်ကယ် က … Read more
← Previous Page1 … Page229 Page230 Page231 … Page241 Next →
August 2020 (347)
© 2020 Lupyo News • Built with GeneratePress